သေရင်လည်း သေလိုက် ပါတော့လို့ အော်နေ ရတဲ့ အထိ ကိုဗစ်ရောဂါကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မေမီကိုကို – Shwe Likes
ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ သရုပ်ေ ဆာင်မင်းသ မီးချော မေမီကို ကို ကတော့ လက်ရှိမှာ Covid 19 ရောဂါ ကူးစက် ခံစားနေ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ရောဂါ ကူးစက်ခံ ရတာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေတာ (၁၀)ရက်ေ ကျာ်ကြာမြင့်ခဲ့ြ ပီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဂရုစိုက်နေထိုင် စားသော က်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အဖျားဝ င်ပြီး (၅ )ရက်လော က် အစားမဝင်ခဲ့ပေမယ့် အနံ့စပျောက်တဲ့ နေ့ကတည်းက ကြိတ်မှိတ် စားသော က်နေပြီး ရောဂါကို အလူးအ လဲခံစားရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံေ တွကို ဝေမျှပြောြ ပလာပါတယ်..။
ကိုယ်အေ လးချိန်လည်း ကျသွားခဲ့ရပြီး လက်ရှိ မှာတော့ အနံ့ပြန်ရနေကာ ပရိသ တ်တွေကိုလည်း စိတ် ဓာတ်မကျဖို့နဲ့ အစားများများစားပြီး ကျန်းမာအောင် နေကြဖို့ တိုက်တွန်းထား ပါသေးတယ်..။
“ရက်ပေါင်း၁ ၀ ရက်ကို အောင်မြင် စွာဖြတ်ေ ကျာ်နိုင်ပါပြီ….
စားတယ် ငိုတယ် အိပ်တယ်… ဒီသုံးမျိုးနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ ပါတယ်…. စဖျားတုန်းက ၅ရက်လော က်အစားမဝ င်ပါဘူး အနံ့စေ ပျာက်တဲ့ေ န့တည်းက သေမှာမကြောက်ပေမဲ့ သေသွားမှာ စိုးတာနဲ့ အကုန်ပါး စပ်ထဲ ထည့် ပါတယ်…
အရင်က ဝိတ်ထိန်း တဲ့အနေနဲ့ ငါးပိရည်နဲ့ မစား ပါဘူး ခုဆို ငါးပိရ ည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ထမင်း ကိုတွယ်ပါတယ်… အစားလွန်ပြီး အိ အိအအတွေ အော်ရတဲ့အ ထိ စားမိပါတယ်😅…. အခန်း ထဲပိ တ်ပြီးနေပါတယ်… လေဖြတ်ထား တဲ့အဖေ့ကို ကူးမှာစိုးလို့….
အိပ်တာကလ ည်း တရားလွန်အိပ် ပစ်တယ်…. တချက်တချ က်ကျရင် အသက်ရှု မရတော့လို့ လန့်ပြီး ငိုတယ်….ချောင်းတခါ ဆိုးရင် မေတ္တာပို့ပို့ပြီး အော်ငိုရတာ လည်းအမော(ငါလေ သေလည်း မသေနိုင်ေ သးဘူး သေရင်လည်း သေ လိုက်တော့) ဆိုပြီး🤭 …
ငိုပြီးရင် အားသာချက်က ပွင့်ထွက်သွား တယ်စိတ်တွေ နေလို့ကော င်းသွားတယ်… ကျွန်တော့်အ တွက် တစ်ခုရှိတာက ဖျားနေတဲ့အတွင်း ကြက်ပြုတ်လည်း မလိုအပ်ခဲ့သလို ကြက်ဥလည်း မစားခဲ့ပါဘူး…. ဖျားရင် ဒါတွေေ သာက်ရမှာ ထုံးစံလိုြ ဖစ်ပေမဲ့ ကျွ န်တော်မစားနိုင်ခဲ့ဘူး(စားမဝင်လို့)….
ထမင်းစားက အစာမကြေတာေ တာ့ အနည်းငယ်ဖြ စ်တာပေါ့….ဒါမဲ့ ကျွန်တော်ထမင်းပဲစားပါတယ်….ကျွန်တော်ကိုဘေးနားမှာ ပြစုပေးတဲ့အစ်မနှစ်ေ ယာက်ဆို အမြဲလက်ဆေးနေတော့ သူတို့ကို မကူးခဲ့ဘူး…
သူတို့က သန်မာတဲ့ သူတွေ😁….ဘာပဲပြောပြောထပ် မှာချင်တာ ကတော့စားပါ….အရမ်းစားပါနော်….ပြီးတော့ 💊ဆေးကိုလည်း ပတ်လည်အောင် သောက်ကြပါနော်.. .စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ Fighting ပါ….💪🏻
ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပူေ ပးကြတဲ့ သူတွေ အကု န်လုံးကို ကျေးဇူးမွချိပါလို့…🥰..” ဆိုပြီး မေမီကိုကိုက ပြောပြထားတာပါ..။
ပရိသတ်တွေကလည်း ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ သူမကို စိတ်ပူနေကြပြီး လက်ရှိမှာ အကောင်း ဆုံးရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းေ နတာကြောင့် အားပေးစကားေ တွလည်း ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။